မြစ်ဆုံကိစ္စ အတိုင်ပင်ခံပုဂ္ဂိုလ်ပြောပြီ...! - Thadin
March 15, 2019 Kay Kay NEWS Comments Off on မြစ်ဆုံကိစ္စ အတိုင်ပင်ခံပုဂ္ဂိုလ်ပြောပြီ…!
မစ်ဆုံစီမံကိန်းကို ပြည်သူတွေအနေနဲ့ အမြင်ကျယ်ကျယ်နဲ့ အဘက်ဘက်က စဉ်းစားစေချင်တယ်လို့ နိုင်ငံတော်၏အတိုင်ပင်ခံ ပုဂ္ဂိုလ် ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်က ပြောကြားလိုက်ပါတယ်။
မြစ်ဆုံစီမံကိန်းဟာ တပ်မတော်အစိုးရလက်ထက်က သဘောတူခဲ့ တဲ့စီမံကိန်းဖြစ်ပြီး အကောင်အထည်ဖော်ချိန်မှာ ကန့်ကွက်မှုတွေရှိခဲ့ တာကြောင့် ပြီးခဲ့တဲ့ အစိုးရသက်တမ်းကစပြီး အခုချိန်အထိ စီမံကိန်းကို ရပ်ဆိုင်းထားတာဖြစ်ပါတယ်။
မွဈဆုံစီမံကိနျးဟာ တပျမတျောအစိုးရလကျထကျက သဘောတူခဲ့ တဲ့စီမံကိနျးဖွဈပွီး အကောငျအထညျဖျောခြိနျမှာ ကနျ့ကှကျမှုတှရှေိခဲ့ တာကွောငျ့ ပွီးခဲ့တဲ့ အစိုးရသကျတမျးကစပွီး အခုခြိနျအထိ စီမံကိနျးကို ရပျဆိုငျးထားတာဖွဈပါတယျ။
This Year : 238454
Total Users : 597478
Total views : 2747707